ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုဒါ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (သို့) မဖြစ်မနေပြုလုပ်သင့်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၁၆၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်က မေဖလားဝါးသဘောင်္နဲ့ ဥရောပတိုက်နိုင်ငံ တစ်ခုကနေ အမေရိကန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ အုပ်စုဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၊ လမ်းပြပို့ဆောင်မှု၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးဘာဆိုဘာမှ မရှိသေးတဲ့ နယ်မြေသစ်မှာ ဆက်လက် ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှုတို့ကြောင့် အမေရိကားတိုက်ကို ခြေချပြီး (၂) နှစ်အကြာမှာ ဘုရားရှင်ထံမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း (Thanksgiving) ခဲ့ကြဒါ အားလုံးသိကြပါတယ်။ အဲဒီ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း (Thanksgiving) ကိုအစွဲပြုပြီး ယနေ့ထိတိုင်အောင် အမေရိကားမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာလ တတိယအပတ်မှာ Thanksgiving နေ့ကို မိမိတို့မိသားစုအသီးသီးနဲ့ဆင်နွဲကြတယ်ဆိုဒါကိုလည်း အားလုံးသိရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ (၂) နှစ်မတိုင်ခင်ဘယ်လို ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီး၊ အဖွဲ့သားဘယ်နှစ်ယောက် ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုဒါကိုတော့ လူတော်တော်များများ မသိကြပါဘူး။ သမိုင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၆၁၀ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်မှာ ပထမဆုံး (Thanksgiving) ကို ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်အတွင်းတစ်နေရာမှာ ဥရောပကရောက်လာတဲ့ လူဖြူ အယောက် (၆၀) ခန့်နဲ့ ဒေသခံအင်ဒီးယာန်း တစ်ချို့ စုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုဒါ ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ နဲနဲထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူဖြူ အယောက် (၆၀)ဟာ ဥရောပတိုက်ကနေ စတင်ရွက်လွင့်ခဲ့စဉ်က (၄၀၉) ယောက်ရှိပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ခန့် အတွင်းမှာဘဲ သူတို့ချစ်တဲ့ ညီအစ်ကို၊ မိဘတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ ချစ်ရသူများ ခွဲခွါသွားချိန်မှာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဘွယ်ရာနေ့ရက်များကို မေ့ဖျောက်ပြီး ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုပြန်လည် ရေတွက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နူနာစွဲသူ (၁၀) ယောက် ရှင်လုကာ ၁၇း၁၁-၁၉ မှာဖော်ပြတဲ့ နူနာစွဲသူ (၁၀)ယောက်အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ အဲဒီမှာ နူနာစွဲသူ (၁၀)ယောက်ကို သခင်ယေရှု က ရောဂါပျောက်ကင်း စေတယ်ပါတယ်။ အားလုံးရောဂါပျောက်သွားကြပေမဲ့ တစ်ယောက်သောသူသာလျှင် သခင်ယေရှု ဆီပြန်လှည့်လာပြီး ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။ ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ ကျန်တဲ့ (၉) ယောက်က ဘာတွေ လုပ်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ လှည့်မလာသလည်း ဆိုဒါဖော်ပြမထားပါဘူး။ ဒါပေမည့် Charles Brown ဆိုသူက၊ အဲဒီ (၉) ယောက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ ပြန်လှည့်မလာရတဲ့အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြ ပါတယ်။ အတိအကျတော့ မှန်ချင်မှမှန်မှာဖြစ်ပေမဲ့၊ သာမန်လူသားတို့ရဲ့ တွေးတောပုံ သဘောတရားကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
– တစ်ယောက်က ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ငါအခုမနူဘူး – တစ်ယောက်က ရောဂါပျောက်မပျောက်စစ်ပေးမဲ့ ဆရာ(ယဇ်ပုယောဟိတ်)ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောမယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံး သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲက နူနာရောဂါသည်များ အကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းသိရှိနားလည်ကြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်အခါက နူနာရောဂါ ဟာ အင်မတန်မှ ကြောက်ဖို့ကောင်းပြီး နူနာစွဲသူတစ်ယောက်ဟာ လူတောသူတော ထဲဝင်ခွင့်မရတဲ့အပြင် မြို့ထဲတောင် ၀င်ခွင့်မရှိ မြို့ပြင်မှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။ မောရှေ ရဲ့ကျဉ့်ထုံးဥပဒေမှာ နူနာစွဲ သူကို မသန့်ရှင်းသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တောလည်ရာကျမ်း (၅း၂-၃) မှာသူတို့ဟာ မိသားစုတို့နဲ့ အတူတူမနေထိုင်ရဘဲ မြို့ပြင်မှာနေရပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ အယူအဆမှာ နူနာစွဲ သူဟာ ဘုရားရဲ့ ငြူငြင်မှုကိုခံရသူဖြစ်တယ်၊ ပြစ်ဒဏ်သင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နူနာစွဲသူ တစ်ယောက်ဟာ အရာအားလုံး (မိသားစု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရွှေငွေ ပိုင်ဆိုင်မှု) ကိုစွန့် လွတ်ရပါတယ်။ လုကာ ၁၇း၁၂ မှာ “နူနာစွဲသောသူတကျိပ်တို့သည် ခရီးဦးကြိုပြု၍ အဝေးကရပ်လျက်” လို့ဖော်ပြထားဒါကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ အဲဒီခေတ်က နူနာစွဲသူတစ်ယောက် ဟာ လူတွေနဲ့ အနီးဆုံး ခြေလှမ်း အလှမ်း (၁၀၀) အကွာမှာနေရ ပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ အနီးကိုသွားကပ်ပြီး ကျန်းမာခြင်းအခွင့် တောင်းခွင့် မရရှိပါဘူး။ နူနာစွဲသူနှင့်အပြစ်သား
နူနာစွဲသူတစ်ယောက်အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြရခြင်းအကြောင်းကတော့ နူနာစွဲခြင်း ဟာ အပြစ်တရားကို သဏ္ဍာန်ဆောင်ပြီး စာတန်မာရ်နတ်ဟာ လူသားအားလုံးကို အပြစ်တရား လို့ခေါ်တဲ့ နူနာစွဲခြင်းနဲ့သဏ္ဍာန်တူတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်ဖို့ သိမ်းသွင်းစည်းရုံးချင်တဲ့ အကြောင်းကိုသဘောပေါက်စေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Eaton’s Bible Dictionary ထဲမှာ နူနာရောဂါကို “လူတို့၏ ၀ိညာဉ်ရေးအရ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကို မြင်သာစေသော ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြင်ပဖြစ်ပျက်မှု” ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ အနာကြီးရောဂါစွဲသူအားလုံး အပြစ်ရှိသူများဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ရိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အနာကြီးရောဂါစွဲကပ်သူ များရဲ့ ထိုခေတ်ထိုအခါက ဘ၀နှင့် အပြစ်ရှိသူ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့၏ ဘ၀ တူသည့် အချက်များရှိသည်ဟု ထောက်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်သားများဟာ နူနာစွဲတဲ့သူတွေလိုဘဲ ဘုရားသခင် နိုင်ငံတော် ရဲ့ပြစ်ပြယ်ခြင်း ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နူနာစွဲကပ် နေသူများလိုဘဲ အပြစ်သားများဟာ ရှိသမျှ အရာအားလုံးကို ဆုံးရှုံး စွန့်လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နူနာစွဲသူများလိုဘဲ အပြစ်ရှိသူများဟာ မိမိရဲ့အပြစ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းကို ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း နူနာစွဲသူများက သခင်ယေရှုကို ကျန်းမာခြင်းအခွင့်ပေးဖို့ အဝေးမှအော်ဟစ် အကူအညီတောင်းပါတယ်။ နူနာစွဲသူဟာ ဘယ်လူကောင်း အနားကိုမျှ သွားခွင့် မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘယ်သမားတော် အနားကိုလည်း ကပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နူနာ စွဲပြီဆိုရင် ကယ်သူမဲ့ဘ၀ ကိုရောက်ရဒါနဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိစွဲကပ်တဲ့ ရောဂါနဲ့တသက်လုံး အပယ်ခံဘ၀မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးနေရုံဘဲ ရှိပါတော့တယ်။ ထိုနည်း၎င်းဘဲ အပြစ်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဘ၀ဟာလည်း ကယ်သူမဲ့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်သူမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အပြစ်သားလူသားတို့ရဲ့အဖြစ်ကို ကယ်နိုင်မည့်သူ၊ ကယ်နိုင်မဲ့သူ သခင်ယေရှုကလွဲရင်လောကမှာ တစ်စုံ တစ်ယောက် မှမရှိပါဘူး။ ရောမ ၅း၆ မှာ “ငါတို့သည်အကျိုးနည်းရှိစဉ်တွင်ပင်ှ ခရစ်တော်သည် မတရားသောသူတို့ အတွက် ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏” လို့ဆိုထားပါတယ်။ “အကျိုးနည်းရှိနေစဉ်တွင်” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို အင်္ဂလိပ် ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ “when we were still powerless” လို့သုံးထားပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အချိန် (သို့) တနည်းအားဖြင့် ကယ်သူမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သခင်ယေရှုဟာ ငါတို့အတွက် အသေခံတော်မူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်သား ကျွန်တော်တို့ဟာ ထို အနူစွဲနေသူတွေလိုဘဲ ဘာမှမတတ်နိုင် (powerless) ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ သနားခြင်းဂရုဏာကို တောင်းခံခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့
ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံ အစစ်ဆေးခံဖို့ အသွား သူတို့ရဲ့ ရောဂါများပျောက်ကင်းသွားကြပါတယ်။ အပိုဒ်ငယ် (၁၅-၁၆) မှာ “ထိုသူတို့တွင် တယောက်သောသူသည် အနာရောဂါကင်းလွတ်သည်ကို သိမြင်လျှင်၊ ပြန်လာ၍ ကြီးသောအသံနှင့် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။ ခြေတော်ရင်း၌ ပြပ်ဝပ်၍ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါသည်ဟု ဝန်ခံလေ၏။” ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ အခြား (၉) ယောက်လည်း သူတို့ရဲ့ ရောဂါများပျောက်ကင်း သွားတာကို အသေအချာတွေ့ရှိ သဘောပေါက်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကား မပြောတာလဲ ? ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က တစ်ယောက်သောသူနဲ့ (၉)ယောက်တို့ အကြားခြားနာချက် သုံးချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်။
ထိုတစ်ယောက်သောသူသည် ရောဂါပျောက်ကင်းသည်ကို သိရှိနားလည်သည်နှင့် မိမိပထမဦးဆုံး ဦးစားပေးပြုလုပ်ရမည့် အရာ (သို့) သူ့နေရာနှင့်သူ သူ့အချိန်နှင့်သူ ပြုလုပ်သင့်သည့်အရာကို နားလည်သည်။ သခင်ယေရှုကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောရန်၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရန် အမှုသည် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါ အရ ပထမဦးစားပေး ဖြစ်သည်ကို အသေအချာသဘောပေါက် နားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဂ) ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း၏အကျိုးကိုအပြည့်အ၀ခံစားရရှိခြင်း
တစ်ယောက်သောသူ၏ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်သော နှလုံးသားသည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးမှုကို ထင်ဟပ်ပြကာ ထိုတစ်ယောက်သောသူသည် စစ်မှန်သော ခရစ်တော်၏ သစ္စာရှိနောက်လိုက် တပည့်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ နာမတော်မြတ်၌
This entry was posted on November 8, 2010 by thawngno in Articles Christian Life, Articles Thanks Giving, Thawngno and tagged Thanks giving, Thawngno.	Shortlink